विदेश पढ्न गएका छोराछोरी बिग्रे कि?
संजीव पाण्डे print
सिड्नीमा गएको दश दिन भित्रमा मात्र दुईजना नेपाली विद्यार्थीहरूको दु:खद् निधन भयो। प्रष्ट कारण अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहे पनि सर्सती हेर्दा एउटा घटना लागू पदार्थ दुर्व्यसनमा फसेको युवाले गरेको आत्महत्या भन्ने बुझिएको छ भने अर्को घटनाको कारण अझै अज्ञात नै छ। यी दोस्रा विद्यार्थी शारीरिक रूपमा दुर्बल थिए र कडा शारीरिक परिश्रम हुने काम गर्थे भन्ने सुनिएको छ।
यी त भर्खरका घटना भए; विगतमा पनि थुप्रै नेपाली युवाहरूले दुर्घटना,शारीरिक अस्वस्थता र आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएका धेरै घटनाहरू हाम्रो स्मृतिमा ताजै छन्। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन विद्यार्थी स्वयम् र यहाँको स्थानीय समुदायले कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा यहाँ रहेका नेपालीहरू गम्भीर हुन थालेको भेटिन्छ।
तर यस लेखको उद्देश्य त्यसभन्दा बाहेकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष-नेपालमा रहेका बाबुआमा र आफन्तहरूले के-कस्तो कुरामा सावधानी पुर्‍याउनुपर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल गर्नु हो। अष्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई ध्यानमा राखेर लेखिएको भए पनि अमेरिका, युरोप, जापानलगायत अन्य राष्ट्रहरूमा छोराछोरी पढ्न पठाएका बुवाआमालाई समेत यी जानकारी उपयोगी हुन सक्छन्।
खर्चको निगरानी राखौँ
अष्ट्रेलियामा महंगो विश्वविद्यालयमा पढ्न आएका विद्यार्थीहरूलाई पढाइ खर्च प्राय अपुग हुन्छ। त्यस्तै, धेरै सस्तो कलेजमा पढ्ने तर काम धेरै गर्ने विद्यार्थीले पैसा जोगाउन सक्ने पनि हुनसक्छ। छोराछोरी कहाँ पढ्दैछन् र त्यहाँको ट्युशन फी कति छ, त्यो बाबुआमाले थाहा पाउनुपर्दछ। छोराछोरी कति काम गर्दछन् र कति कमाउँछन् भन्ने बारेमा पनि सक्दो जानकारी राख्नुपर्दछ।
ट्युशन फी बाहेक एउटा सामान्य विद्यार्थीलाई हप्ताको दुई सयदेखि साढे तीन सय डलरसम्मको खर्च पर्याप्त हुन्छ। यदि छोराछोरी महंगो विश्वविद्यालयमा पढ्दैछन् भने उनीहरूलाई नेपालमा पैसा पठाउने दबाब दिनु उचित हुँदैन। त्यस्तै, कमाइ धेरै छ र त्यो सबै खर्च हुनुपर्ने कारण देखिँदैन भने बुवाआमाले पैसाको बारेमा खोजी नीति गर्नु उचित हुन्छ।
हातमा पैसा भएपछि कुलतमा फँस्ने सम्भावना बढ्नसक्छ।
संगत कस्तो छ जानी राख्ने
विख्यात लेखक जिम रोन भन्छन् 'तपाईंले सबैभन्दा धेरै समय बिताउने पाँचजना साथीको औसत भनेको तपाईं हो।' साहित्यकारले धेरै समय साहित्यकारसँग बिताउँछ, कलाकारका नजिकका साथीहरू प्राय: कलाकार नै हुन्छन्। त्यस्तै, गँजेडीका साथीहरू गँजेडी र जुवाडेका संगत पनि धेरै जुवाडेहरूसँग नै हुने सम्भावना हुन्छ। आफ्ना छोराछोरीका सबैभन्दा नजिकका साथीहरू को-को हुन्, त्यो बुबाआमाले थाहा पाउनुपर्दछ।
आफ्ना छोराछोरी बिग्रेको धेरैलाई स्वीकार्न गार्‍हो हुनसक्छ, तर उसका साथीहरूको जीवनशैली र व्यहोरा हेरेर ती साथीहरू खराब बाटोमा छन् भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। तपाईंका छोराछोरीका साथीहरू खराब बाटोमा छन् कि भनेर चनाखो हुनुपर्दछ। उनीहरूसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा रहनु उचित हुन्छ।
नेपालीमा उखानै छ काग, कागसित, बकुल्लो बकुल्लोसित।
फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि छोराछोरीको निगरानी राख्न सकिन्छ। उनीहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रुचाउँदैनन्, वा परिवारका सदस्य र आफन्तलाई त्यसमा साथी बनाउँदैनन् वा अस्वभाविक पोस्ट र तस्बिरहरू राख्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा बढी सचेत हुनुपर्दछ। अष्ट्रेलियामा धेरै विद्यार्थी बिग्रने दुर्इवटा कुलत प्रमुख छन्-पोकर (जूवा) र लागू पदार्थ। यी दुवैथरी नशामा लागेका व्यक्तिहरू सामान्यतया: सामाजिक सञ्जालमा आउन वा सक्रिय हुन रुचाउँदैनन्।
यी दुवैथरी नशामा केटाहरू बढी परेका भेटिन्छन्। तर जानकारहरूका अनुसार अहिले दुर्व्यसनी केटीहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ।
छोराछोरी विदेशमा छन् भने त्यही देशमा पहिलेबाटै बसोबास गरेर स्थापित भएका तपाईंका कोही न कोही आफन्त वा चिनजानका व्यक्तिहरू हुनसक्छन्। उनीहरूलाई तपाईंले अभिभावकको भूमिका निभाउन अनुरोध गर्नुपर्दछ। कम्तीमा पनि एक-दुई महिनामा एक पटक भेट गर्ने, चाडबाडमा बोलाउने सम्मको सम्बन्ध रहिरहँदा पनि छोराछोरी कुनै कुलतमा लागेका रहेछन् भने उनीहरूले अन्दाज गर्नसक्छन्।
कुनै पनि दुर्व्यसन सुरुवाती चरणमै पत्ता लगाइयो भने उपचार सहज हुनसक्छ। विदेशमा रहेका तपाईंका आफन्तले बोलाउँदा पनि तपाईंका छोराछोरी भेट्न जाँदैनन् वा उनीहरूसँग पनि सम्पर्कमा बस्दैनन् भने उनीहरू गलत मार्गमा त छैनन् भनेर सचेत हुनुपर्दछ।
म भेट्न आऊँ?
यो प्रश्न तपाईंले समय-समयमा छोराछोरीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। जूवा वा लागू पदार्थको दुर्व्यसनमा परेकाहरू घर परिवारसँग कम सम्पर्कमा रहन मन पराउँछन्। उनीहरू नेपाल फर्कन पनि हतारिँदैनन् भने बुवाआमा आफूलाई भेट्न पनि नआइदिएहुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। तपाईंलाई बढी नै शंका लाग्यो भने आफै भेट्न जानु पनि बुद्धिमानी ठहर्छ।
छोराछोरीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने र समयसमयमा नेपाल आउन उत्प्रेरित गर्नु उचित हुन्छ।
पहिलेबाटै कुलतमा हो?
कतिपय बुवाआमाले आफ्नो छोराछोरी लागू पदार्थ दुर्व्यसनजस्तो कुलतमा लागेको थाहा पाएपछि त्यसबाट छुटकारा पाउला भन्ने आशाले जबर्जस्ती विदेश पठाएका हुन्छन्। तर उहाँहरूलाई थाहा हुन्न-अष्ट्रेलियामा पनि लागू पदार्थ सजिलै उपलब्ध हुन्छ। नेपालमा र यहाँ केवल दुर्इवटा कुरा मात्र फरक छन्। पहिलो, यहाँ लागू पदार्थ महंगो हुन्छ र दोस्रो, नेपालमा जस्तो बुवाआमासँग डराईडराई लुकेर सेवन गर्नुपर्दैन। डेरामा साथीभाइ जम्मा गरेर ढुक्कले रमाइलो गर्न सकिन्छ।
आफ्ना छोराछोरी कुलतमा छन् भने त्यसको पूर्ण उपचार नगरी विदेश पठाउनु ठूलो भूल हुनसक्छ।
छोराछोरीको व्यवहार शंकास्पद लागेमा तपाईंले तुरुन्त उचित कदम चाल्नुपर्दछ। अन्यथा, उनीहरूले ज्यान नै गुमाउन सक्ने सम्भावनासमेत हुनसक्छ। सम्बन्धित देशमा रहेका आफ्ना चिनजानका साथीभाइको माध्यमबाट छिटो यथार्थ पत्ता लाग्नसक्छ। यदि उनीहरू दुर्व्यसनमा लागेको यकिन भएमा आफन्त,साथीभाइ, एनआरएनएलगायत अन्य सामाजिक संघसंस्था, छोराछोरीको शैक्षिक संस्था आदिको समेत मद्दत लिएर उनीहरूलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा पुर्‍याउने वा परामर्शको लागि पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।
र, छिटोछिटोभन्दा छिटो स्वदेशमै फर्काउने प्रयास गर्नुपर्दछ। जसरी गम्भीर शारीरिक रोग लागेको अवस्थामा छोराछोरीलाई गाली नगरी उपचार गराउनतर्फ पहल गरिन्छ, त्यसरी नै जूवा र लागू पदार्थ सेवनजस्ता समस्यालाई पनि मानसिक समस्याको रूपमा स्वीकारी उनीहरूलाई हेला गरेर होइन, प्रेमपूर्वक सम्झाएर उपचार गराउनतर्फ लाग्नुपर्दछ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १२, २०७२ १४:०४:२८